Ch 14 Mark – 2trondro
Home / Baiboly / Filazantsaran'i Marka / Ch 14 Mark
14:1 Ary ny andro firavoravoana amin'ny Paska sy ny mofo tsy misy masirasira dia roa andro lasa. Ary ny lohan'ny mpisorona, ary ny mpanora-dalàna, nitady ny fomba izay mety fitaka nisambotra azy sy hamono azy.
14:2 Fa hoy izy ireo:, "Tsy amin'ny andro firavoravoana, fandrao hisy tabataba amin'ny olona. "
14:3 Ary raha tonga teo am Bethania, tao an-tranon'i Simona boka, ary nipetraka nihinana hihinana, ny vehivavy tonga manana alabastara feno menaka manitra kaontenera, ny sarobidy narda. Ary fandravana misokatra ny vatosanga fasiana fitoeran-javatra, naidiny ny lohany.
14:4 Ary nisy ny sasany izay tezitra ka nifampilaza sy izay nanao hoe:: "Inona no antony io fandaniam-poana ny menaka manitra?
14:5 Fa io menaka io no afaka namidy ho lafo tsy denaria telon-jato ka nomena ny mahantra. "Dia nimonomonona azy.
14:6 Fa i Jesoa nanao hoe:: "Avelao izy. Inona no antony fa ianareo no mampalahelo azy? Izy soa no nataony asa ho ahy.
14:7 Fa ny mahantra, ianao dia eto aminareo mandrakariva. Ary raha tianao, ianao dia afaka hanao ny tsara amin'izy ireo. Fa tsy manana ahy mandrakariva.
14:8 Fa izy kosa nanao izay azony natao. Efa tonga mialoha hanosotra ny faty ho amin'ny fandevenana.
14:9 Amen Lazaiko aminareo, Na aiza na aiza Filazantsara ity dia hotorina manerana izao tontolo izao, ny zavatra nataony koa holazaina, fahatsiarovana azy. "
14:10 Ary Jodasy Iskariota, iray amin'ireo roa ambin'ny folo lahy, lasa, ny mpitarika ny mpisorona, mba hamadika an'i Jesosy aminy.
14:11 ary izy ireo, rehefa nandre izany, dia faly. Ary nampanantena azy ireo fa izy ireo hanome vola azy. Ary satria nitady izay manararaotra fomba izay mba hamadika Azy.
14:12 Ary amin'ny andro voalohany ny mofo tsy misy lalivay, rehefa immolate ny Paska, tamin'ny mpianatra niteny taminy, "Aiza no tianao halehanay hanamboaranay mba hihinananao ny Paska?"
14:13 Dia naniraka roa lahy tamin'ny mpianany, ary hoy izy taminy: "Mankanesa any an-tanàna. Ary ianao hihaona lehilahy mitondra siny feno rano; dia manaraha azy.
14:14 Ary na taiza na taiza no efa niditra, lazao amin'ny tompon-trano, 'Hoy ny Mpampianatra:: Aiza ny efitra fisakafoana, izay hiarahako mihinana ny Paska amin'ny mpianatro?'
14:15 Ary izy hanoro anareo cenacle lehibe, tanteraka izay voaisy fipetrahana. ary, Ary hanatitra azy ho antsika. "
14:16 Ary ny mpianany niala Jesosy ka nankany an-tanàna. Ary nahita araka izay efa nolazainy taminy. Dia namboatra ny Paska.
14:17 Avy eo, rehefa hariva ny andro, dia tonga tamin'ny roa ambin'ny folo lahy.
14:18 Ary raha nipetraka nihinana ireo, ary miara-mihinana amin'ny latabatra, Hoy i Jesosy, "Amen Lazaiko aminareo, fa ny anankiray aminareo, izay miara-mihinana amiko, no hamadika Ahy. "
14:19 Anefa izy ireo nalahelo am-po sy ny lazao aminy, iray isaky ny mandeha: "Moa I?"
14:20 Ary hoy Izy taminy:: "Izay anankiray amin'ny roa ambin'ny folo lahy, izay miara-manatsoboka ny tànany tamiko tao anatin'ny lovia.
14:21 ary tokoa, ny Zanak'olona dia mandeha, araka ny efa nanoratana azy. Nefa lozan'izay olona hahazoana izay ny Zanak'olona dia hatolotra. Mety ho tsara kokoa ho an'izany olona izany raha tsy ary akory na oviana na oviana. "
14:22 Ary raha mbola nihinana aminy, Jesosy nandray mofo;. Ary nitso-drano azy, dia novakiny ka natolony azy ireo, ka hoy Izy:: "Raiso. Ity no tenako. "
14:23 Ary dia nandray ny chalice, misaotra, dia natolony azy ireo. Ka dia nisotroan'izy rehetra avy aminy.
14:24 Ary hoy Izy taminy:: "Ity no rako, dia ny amin'ny fanekena, izay alatsaka ho an'ny maro ho.
14:25 Amen Lazaiko aminareo, Aho, dia ny tsy hisotro intsony avy amin'ity vokatry ny voaloboka, mandra-pahatongan'ny andro izay dia hisotroako izay vaovao any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. "
14:26 Ary rehefa nihira fiderana, dia lasa nankany amin'ny tendrombohitra Oliva.
14:27 Ary hoy Jesosy taminy:: "Ho rehetra hiala amiko amin'ity alina ity. Fa efa voasoratra: 'Hamely ny mpiandry, ary ny ondry, dia hiparitaka. '
14:28 Fa rehefa efa nitsangana indray, Aho, dia hialoha anareo ho any Galilia. "
14:29 Ary hoy Petera taminy:, "Na dia rehetra dia efa lavo niala tamin'ny aminareo, nefa izaho tsy. "
14:30 Ary hoy Jesosy taminy:, "Amen Lazaiko aminareo, fa anio, amin'ity alina ity, tsy mbola misy akoho efa niloa ny feony indroa, dia handà Ahy intelo ianao. "
14:31 Ary Izy niteny bebe kokoa, "Na dia tsy maintsy ho faty aho miaraka aminareo, Dia tsy handà anao. "Ary niteny toy izany koa izy rehetra koa.
14:32 Dia nankany amin'ny firenena toetrany, ny anarana hoe Gethsemani. Ary hoy izy tamin'ny mpianany, "Mipetraha eto, raha mivavaka aho. "
14:33 Ary dia nitondra an'i Petera, ary James, sy Jaona niaraka taminy. Ary izy vao matahotra sy nanasatra.
14:34 Ary hoy Izy taminy:: "Ny fanahiko dia feno alahelo, na dia ho amin'ny fahafatesana. Mitoera eto ary ho mailo. "
14:35 Ary rehefa nandroso tamin'ny fomba kely, dia lavo niankohoka tamin'ny tany. Ary nivavaka fa, raha azo atao, ny ora mba hialan'izany aminy.
14:36 Ary hoy izy:: "Aba, Ray, ny zavatra rehetra dia hain'ny anao. Raiso ity chalice amiko. Fa aoka kosa ho, tsy ny sitrapoko, fa ny anao. "
14:37 Dia nandeha izy ka nahita azy ireo matory. Ary hoy izy tamin'i Petera: "Simon, matory ve ianao? Ianao no tsy afaka ny ho mailo ny ora iray?
14:38 Miareta tory sy mivavaha, ka dia mba tsy hidiranareo amin'ny fakam-panahy. Ihany ny fanahy vonona, fa ny nofo no malemy. "
14:39 Ary nony lasa indray, nivavaka, nanao izany teny izany ihany.
14:40 Ary niverina teo, dia nahita azy matory indray, (fa efa nilondolondo ny masony) ary izy ireo dia tsy mahay mamaly azy.
14:41 Ary tonga fanintelony, ary hoy izy taminy: "Matoria izao, ka mialà sasatra. Aoka izay. Tonga ny fotoana. Indro, ny Zanak'olona dia hatolotra eo an-tànan'ny mpanota.
14:42 Mitsangàna, aoka isika handeha. Indro, izay no hamadika Ahy dia akaiky. "
14:43 Ary raha mbola niteny, Jodasy Iskariota, iray amin'ireo roa ambin'ny folo lahy, tonga, ary ny fehiny dia nisy vahoaka be mitondra sabatra sy langilangy, nalefa avy amin'ny mpitarika ny mpisorona, ary ny mpanora-dalàna, ary ny anti-panahy.
14:44 Ary ilay namadika Azy nanome famantarana, nanao hoe:: "Ary izay no hanoroka, Izy. Raiso ny azy, ka mitondra azy amim-pahamalinana. "
14:45 Ary rehefa tonga, avy hatrany manakaiky azy, hoy izy:: "Arahaba, Master!"Ary dia nanoroka azy.
14:46 Anefa izy ireo nisambotra an'i Paoly, ary nihazona azy.
14:47 Ary ny anankiray tamin'izay nijanona teo, mpitan-tsabatra, nikapa ny mpanompon'ny mpisoronabe ary nanapaka ny sofiny.
14:48 Ary ho setrin'ny, Hoy Jesosy taminy:: "Efa niainga mba hisambotra ahy, toy ny hoe mba jiolahy, mitondra sabatra sy langilangy?
14:49 Daily, Teo aminareo an-kianjan'ny tempoly, nefa tsy nahatratra ny ahy. Fa toy izany, ny soratra masina dia tanteraka. "
14:50 Ary hoy ny mpianatra, nandao azy tao ankoatry, rehetra nandositra.
14:51 Ary nisy zatovo anankiray nanaraka Azy, manana na inona na inona fa lamba rongony fotsy madinika ny tenany. Ary izy ireo naka azy.
14:52 fa, mandà ny lamba rongony fotsy madinika, afa-nandositra nitanjaka izy.
14:53 Ary nitondra an'i Jesosy ho any amin'ny mpisoronabe. Ary ny mpisorona sy ny mpanora-dalàna ary ny loholona dia nivory.
14:54 Ary Petera nanaraka Azy teny lavidavitra eny, na dia ho eo an-kianjan'ny tranon'ny mpisoronabe. Ary niara-nipetraka tao amin'ny mpiandry raharaha teo anilan'ny afo namindro.
14:55 Na izany aza tena, ny mpitarika ny mpisorona sy ny Synedriona rehetra nitady vavolombelona hiampanga an'i Jesosy, ka dia mba hanolorany azy ho faty, fa tsy nahita tsy.
14:56 Fa maro no niteny lainga Azy, fa ny fijoroany ho vavolombelona dia tsy manaiky.
14:57 Ary ny sasany, eny, nifoha, niteraka lainga Azy, nanao hoe::
14:58 "Fa renay izy nilaza, 'Izaho handrava ity tempoly, nataon-tanana, ary amin'ny hateloana dia hanangana hafa izay, tsy nataon-tanana. ' "
14:59 Ary ny fijoroany ho vavolombelona dia tsy manaiky.
14:60 Ary ny mpisoronabe, eny, nifoha eo aminy, nanontany an'i Jesosy, nanao hoe:, "Ve ato aminareo hoe: na inona na inona ny amin'ny valin 'ny zavatra ho entina hamelezana anareo amin'izany ireo?"
14:61 Fa tsy niteny, ary dia tsy namaly akory. Indray, ny mpisoronabe nanontany azy, ka hoy izy taminy:, "Ianao ve no Kristy, ny Zanaky ny Isaorana Andriamanitra?"
14:62 Dia hoy Jesosy taminy:: "Izaho dia. Ary ho hitanareo ny Zanak'olona mipetraka eo an-tanana ankavanan'ny herin'Andriamanitra sy tonga eo amin'ny rahon'ny lanitra. "
14:63 Ary tamin'izany ny mpisoronabe, rending ny fitafiany, nanao hoe:: "Nahoana isika no mbola mila vavolombelona?
14:64 Efa renareo ny fitenenany ratsy. Ahoana no toa anao?"Ary nanameloka azy izy rehetra, toy ny meloka ho amin'ny fahafatesana.
14:65 Ary ny sasany nandrora Azy, dia nanarona ny tavany, ary ny hamely azy amin'ny totohondry, ary hoy izy, "Maminania." Ary ny mpanompony namely azy tamin'ny palma-tanana.
14:66 Ary raha mbola Petera tao amin'ny kianjan'ny eto ambany, iray amin'ireo mpanompovavy mpisoronabe tonga.
14:67 Ary nony nahita an'i Petera namindro izy, dia nibanjina azy, ary hoy izy:: "Hianao koa nomba an'i Jesosy avy any Nazareta."
14:68 Fa izy nandà ka, nanao hoe:, "Tsy fantatro tsy azoko hoe." Ary hoy koa izy ivelany, teo anoloan'ny kianja; ary nisy akoho naneno.
14:69 Avy eo indray, vaditsindranon'olona rehefa nahita azy, dia niteny tamin'izay ny mpitazana, "Fa izao no iray tamin'izy ireo."
14:70 Fa izy nandà indray. Ary nony afaka kelikely, indray ireo nijoro teo anilany koa dia nilaza tamin'i Petera: "Raha ny marina, ianao koa mba naman'ireny. Ho anao, koa, dia Galiliana. "
14:71 Avy eo izy vao niozona sy nianiana, nanao hoe:, "Fa tsy fantatro io lehilahy io, momba izay miteny. "
14:72 Ary niaraka tamin'izay dia nisy akoho naneno indray. Ary Petera nahatsiaro ny teny izay nolazain'i Jesosy izy taminy, "Mbola misy akoho maneno fanindroany, dia handà Ahy intelo ianao. "Dia nitomany.